प्रचण्डको प्रश्न- राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने माओवादी कसरी लम्पसारवादी ? – Etajakhabar
प्रचण्डको प्रश्न- राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने माओवादी कसरी लम्पसारवादी ?
सुर्खेत, १० भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ नं प्रदेशलाई पार्टीले विशेष महत्व दिएको बताउनुभएको छ ।
पार्टीको ६ नं प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सरकारले पनि ६ नं. प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईँहरुले यस क्षेत्रमा राम्रो भूमिका खेल्नुभएको छ । तपाईँहरुले जितेका नगरपालिका र गाउँपालिकामा नमूना काम गर्नुस् । ६ नम्वर प्रदेशमा माओवादीको प्रादेशिक सरकार बन्छ, त्यसको तयारीमा लाग्नुस् ।”
नेता दाहालले मधेशको पक्षमा लड्ने शक्ति माओवादी नै हो भन्ने कुरा जनताले विस्तारै बुझ्दै गएको र मधेशका थुप्रै बुद्धिजीवी र नेताहरु माओवादीप्रति आकर्षित हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले संगठन नै मुख्य शक्ति हो, यसले बुर्जुवा वर्गलाई परास्त गर्न सकिन्छ, संगठनको बलले नै ब्यालेटको लडाइँ जितिन्छ भन्नुभयो ।
एक प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो, “माओवादी सामाजिक चरित्रको हुन सकेन । ‘माओवादीका नेता कार्यकर्ता बिहेमा जन्त जाँदैनन्, मर्दा मलामी जाँदैनन् अप्ठ्यारो पर्दा भेट्दैनन्, जनताका गुनासा सुन्दैनन् भन्ने गुनासो छ । यसलाई हामीले सच्याउनैपर्छ । सामाजिक छवि र चरित्र बनाउनुपर्छ ।”
एमाले पहाडमा राष्ट्रवादको नारा बोकेर नश्लवादको अभ्यास र मधेशी दलहरु मधेशी राष्ट्रवादको नाममा पृथकतावादको अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाउँदै नेता दाहालले भन्नुभयो, “हिमाल, पहाड, तराई, मधेशलाई जोड्ने, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने माओवादी कसरी लम्पसारवादी ? हामीले देशको हित विपरीत कुनै निर्णय गरेका छौँ ? हामीले कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेका छौँ ? यो देशमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय एकता चाहने शक्ति माओवादी मात्रै हो, अरु पार्टी छैनन् । बरु उनीहरु आफ्ना अपराध लुकाउन जनता झुक्काइराखेका छन् ।”
प्राप्त परिर्वतनलाई रक्षा गर्दै बाँकी परिवर्तनलाई सबै माओवादी एक हुनुको विकल्प नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ”वैद्यजी पनि कुनै लाज नमानी माओवादी केन्द्रमै आउनुपर्छ, विप्लवजी पनि अन्त जाने ठाउँ छैन । बाबुरामजी पनि भौँतारिनु पर्दैन, दक्षिणपन्थीहरुसँग एकताको गुहार गर्नुभन्दा माओवादीमै आउनु राम्रो हुन्छ । त्यसैले आग्रह छोडेर सबै माओवादीहरु एक ठाउँमा आउनैपर्छ ।”
प्रशिक्षणमा पाँच सयभन्दा वढी कार्यक्रता सहभागी छन् । कार्यक्रममा ६ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १०, २०७४ समय: १०:५६:५६